Amahemuhemu amatsha malunga neMac Pro entsha kunye neMac mini kulo nyaka ka-2022 | Ndisuka kuMac
UManuel Alonso | | Iikhompyuter zeMac, Amahemuhemu
Amahemuhemu amatsha aqhubela phambili izixhobo esiya kukwazi ukuzibona ngo-2022, abonisa ukuba sinokubona iikhompyuter ezimbini ze-Apple kunye neeprosesa ezintsha ze-Apple Silicon. Sithetha ngobukho be iMac Pro encinci kunye neMac mini entsha kakhulu. Izinto ezintsha ezimbini ezilindelekileyo abasebenzisi abajonge ukuzibona kwimarike, kuba phantse lonke uluhlu lweMac luhlaziyiwe, ngaphandle kwezi modeli kwaye ngokunyaniseka, zibaluleke kakhulu kwikhathalogu ukutyeshela uhlaziyo lwabo.
Ndisasetyisa iindaba zamahumhum amatsha we Ii-AirPods Pro IISithetha ngamahemuhemu amatsha abonisa ukuba sinokubona iimodeli ezimbini ezintsha zeMac kwimarike ngo-2022. Akukho nto ingaphezulu kwaye akukho nto ingaphantsi kwemodeli entsha yePro kunye nemodeli encinci. Inyani kukuba ucinga nje ngemodeli yePro ngetekhnoloji yeApple Silicon Kwaye ukubona ukuba iMacBook Pros isebenza ngokukhawuleza kangakanani kunye neetshiphusi ezintsha, kufuneka zibe ngummangaliso kunye nomatshini omkhulu.
Okufanayo kuya kwiMac mini, laa khomputha iguquguqukayo engenawo amandla angakumbi okuba igqibelele kwaye ngoku ixesha layo lisenokuba lifikile kwaye lishiye ezinye njengenkumbulo nje.
Ngokweziqikelelo ezenziweyo kwiblogi kaMark Gurman's Power On Bloomberg, iMac Pro eneApple Silicon iya kusungulwa ngo-2022. UGurman uqikelela ukuba imodeli iya kuba ncinane kunoyilo olukhoyo lweMac Pro. Kwangaxeshanye, kulindeleke ukuba iqulathe uphuculo oluthile lokusebenza xa usebenzisa uyilo lwetshiphu ye-Apple. Inguqulo ye-Apple Silicon ye-Mac Pro inamarhe okuba iquka itshiphu efikelela kwii-cores ezingama-40 kwi-CPU kunye ne-128-core GPU. Ngaphambili, iBloomberg yabanga ukuba iMac Pro izakusebenzisa nokuba yi-20-core okanye 40-core CPUs, kunye nee-64-core kunye ne-128-core iinketho ze-GPU. Ngamanye amazwi, kukulungisa uqikelelo kakuhle ngakumbi. Ngokumalunga nobukhulu bale Mac Pro entsha, ibonisa ukuba inokuba ncinane kuneG4 Cube.
UGurman ukwakholelwa ukuba iMac mini entsha isendleleni. Izinketho zePort zikholelwa ukuba ziquka ukudibanisa kwe-USB 4 kunye ne-USB-A, i-Gigabit Ethernet, i-HDMI, kunye nekhonkco yamandla ajikelezayo. Cinga ngolunye uhlobo lwe-chip ye-M1 njenge-M1 Pro okanye i-M1 Max, okanye isizukulwana esitsha esifana neM2 esele ikhankanyiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Amahemuhemu amatsha malunga neMac Pro kunye neMac mini entsha kulo nyaka ka-2022
Isibhengezo sempembelelo yeApple Watch